Sida Loo Abuuro Waxyaabaha La Wadaagi Karo | Martech Zone
Sida Loo Abuuro Mawduuc La Wadaagi Karo
Axad, Sebtembar 6, 2015 Axad, Sebtembar 6, 2015 Douglas Karr
Sida laga soo xigtay The New York Times Macluumaadka Macaamiisha ee warqad cusub, Cilmu-nafsiga Wadaagga, waxaa jira 5 sababood oo muhiim ah oo dadku u wadaagaan khadka tooska ah:
Qiimaha - Si aad ugu keento waxyaabo kale oo qiimo leh oo wax baraya kuwa kale
Aqoonsiga - Si aan nafteena ugu qeexno kuwa kale
Network - Si loo kobciyo loona nafaqeeyo cilaaqaadkeena
Kaqeybgal - Is-dhammaystirka, qiimaha iyo ka-qaybgalka adduunka
Sababaha - In la faafiyo warka ku saabsan sababaha ama sumadaha
Warbixinta New York Times waa cilmi baaris cajiib ah waxayna isku dhiibaysaa shaqada aan ka qabanno halkan Martech. Intii aan lacag ka sameynay daabicitaankeenna, bogga laftiisa kuma filna (in kasta oo aan halkaa gaadhayno). Martech Zone waxay bixisaa hoggaanka hay'addayada. Teknolojiyada Suuqgeynta, Teknolojiyada Iibka iyo Teknolojiyada Online-ka ah shirkaduhu waxay noogu yimaadaan inay dhisaan websaydhkooda oo ay kobciyaan saamigooda suuqa. Waxay taas u sameeyaan sababtoo ah aasaaska kalsoonida iyo qiimaha aan ku bixinay qodobbadayada halkan.
Waxaan si gaar ah u gaar nahay waxyaabaha aan dooranay inaan wax ka qorno oo aan wadaagno oo aan ka shaqeyno sidii aan wax badan uga qaban lahayn waxyaabaha la wadaagi karo. Sideen u daaweynaa ilaha (sida natiijooyinka New York Times), u qornaa waxyaabahayaga, ugana dhigeynaa kuwo lala wadaagi karo?
Platform - Kahor intaanan bilaabin qoritaanka, waxaan hubinay in bartayada ay taageerto wadaagista. Muuqaalo muuqaal ah iyo goos goosyo hodan ah ayaa hubinaya in waxyaabahayaga laga dhigayo kuwa lala wadaago bulshada. Maqnaanshaha aasaaskani wuxuu burburin karaa xitaa waxyaabaha ugufiican ee la wadaago. Qofna ma doonayo inuu yeesho shaqada wadaagida waxyaabahaaga. U fududee.
Mowduucyada la isku haysto - Xogta muranka dhalisay, dhaarta, iyo joojinta macluumaadka khaldan ayaa lala wadaagayaa celcelis ahaan. Mawduucyadaas muranku ka taagan yahay waxay inta badan naga dhigayaan inaan isku dhacno hoggaamiyeyaasha warshadaha laakiin waxaan helnaa ixtiraamka asxaabta iyo macaamiisha mustaqbalka.
Masawir Qani ah - Ku darista sawir waxay sawir gacmeed fantastik ah ka bixineysaa qof maskaxdiisa. Fiiri sawirka aan u dhignay qoraalkan. Waxay bixisaa sawir cad oo horseed u ah xiisaha waxayna siisaa meel ay dhacdo haddii ay halkaas ka dhigto iyada oo aan lahayn xiriir.
Mawduuc saameyn ku leh - Haddii Google ay ku dhawaaqdo isbeddel muhiim ah oo saameyn ku yeelan kara akhristayaashayada, waxaan la wadaageynaa xalka si aan uga ilaalino aqristayaasheenna hor-socodka. Ma wadaagno wararka warshadaha sida maalgashiga, isbeddelada jagooyinka, ama isku biirista aan saameyn ku yeelan akhristayaashayada.
Mawduuc Qiimo Leh - Haddii nuxurku kordhin karo soo noqoshadaada maalgashiga ama yareyn karo kharashyadaada, waxaan jecel nahay in lala wadaago xalkaas ama sheyga. Mawduucan la wadaagi karo ayaa kaxeynaya tiro booqashooyin ah oo ku saabsan daabacaaddayada.
Discovery - Waxaan wadaagnaa dulmarka guud ee iibka iyo tikniyoolajiyadaha la xiriira suuq-geynta toddobaad kasta oo ku saabsan barta tiknoolajiyada suuqgeynta si aad u ogaato inay jiraan xalal halkaas ka jira oo si gaar ah loogu dhisay dhibaatooyinka ururkaaga. Soo helitaanka barnaamijyadan ayaa naga dhigay ilo caan ah oo loogu talagalay hay'adaha, waaxyada suuqgeynta iyo iibka.
Education - Kuma filna inaan ku xamanno xalka, waxaan had iyo jeer isku dayeynaa inaan ku soo duubno wixii la soo helo wixii talo ah ee akhristayaashayada si aan ugu guuleysto. Mawduucyada u fududeynaya noloshooda waa la wadaagayaa. Talo weyn oo aan lacag ku kacayn way adag tahay in maalmahan la helo!
Calaamadeena ayaa ah Cilmi baaris, Baro, Baro iyo yoolalkaas ayaa wada wadaaga waxyaabaha aan ka kooban nahay. Gaaritaankeenu wuxuu sii wadaa inuu kobciyo laba lambar oo aan bixinaynin dallacaad - tirakoob quruxsan. Dabcan, waxay nagu qaadatay toban sano inaan baranno xeeladahaas. Dabcan - waxaan kula wadaagaynaa adiga akhristayaashayada! Waxaan rabnaa inaad sidaad u guuleysateen oo kale.
Xor ayaad u tahay inaad wadaagto sawirka aan u abuurnay inaan tusno sababta dadka loogu dhiirrigeliyo inay wax ku wadaagaan khadka tooska ah:
8 Fikradaha Sawirka ee Suuqa lagugu suuqgeynayo
Mawduucaagu Wuu Urayaa Maaddaama Ay Ka Maqan Yihiin Walxahaas
Apr 26, 2016 at 1: 44 AM
Waxaan bilaabay akhrinta tan oo aanan badnayn laakiin waxaan helay wax kabadan intii aan filayay. Fikrado fudud oo awood badan halkan. Mahadsanid. Waxaan rajeynayaa inaan maareeyo inaan raaco qaar ka mid ah kuwan 🙂